Vetikal mbukota Machine
Obere akpa mbukota Machine
Tree mbukota Machine
EKELE MAKA ỌEụ
site ha na 21-05-22
Oge izu uka ozo !! Nwere olile anya na ị ga-enwe izu ụka gị ma nabata ajụjụ ọ bụla. Otu Smartweigh
Smartweigh laghachi ịrụ ọrụ taa site na ụbọchị ọrụ
site ha na 21-05-03
Obi ụtọ na Mọnde! Anyị laghachi n'ọfịs taa site na ezumike ụbọchị ezumike, nabata ajụjụ ọ bụla gbasara igwe. Otu Smartweigh
Smartweigh Factory Packaging Machine VFFS Igwe.
Smart Weigh Pack bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ígwè ọrụ na Guangdong, China .Anyị na-enye ihe dị nfe, nchịkọta na igwe nyocha na nri na ụlọ ọrụ na-abụghị nri kemgbe 2012.
Egwuregwu Nkata Egwuregwu Oge Nzuzo Na Brotherlọ Ọrụ Nwanna
Smartweigh nwere egwuregwu basketball na nwanne anyị nwoke ụlọ ọrụ ụnyaahụ.
Schetọ oge ezumike ụlọ ọrụ Smartweigh nke Ememe Ching Ming
Ezigbo ndị ahịa niile, ememme Qingming, nke a makwaara dị ka Tomb-Sweeping Day na Bekee, ememme ndị China nke ndị Han Han nke China mebere. Smartweigh ga-emechi na 3-4, Eprel na ndị ọrụ niile ga-enwe ezumike ụbọchị abụọ .Anyị ga-aza azịza ajụjụ gị. Nke ...
Onye isi njikwa ahịa Smartweigh Maazị Mr.Hanson Wong
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na mahadum, Mr.Hanson na-arụ ọrụ maka a nkwakọ ígwè ọrụ ụlọ ọrụ maka afọ 5, ịbụ agadi mpaghara ire maka anụ ụlọ ahịa, o nwere zuru ahụmahụ na nkwakọ ígwè ụlọ ọrụ. N'oge ahụ, ịbụ onye na-ere ahịa bụ ogologo ụzọ ọ ga-aga iji mee ka ebum n'uche ya, Hanson ghọtara na ọ nọ ...
Womanbọchị Nwanyị Obi tọ
Obi ụtọ na Women'sbọchị Women'smụ nwanyị Mba !wa! Ndị otu Smartweigh na-eme emume dị egwu ụmụ nwanyị ibe anyị na-enye n'inye ihe ngwọta na nkwakọ ngwaahịa.
Osisi Ọhụrụ Smartweigh
N'oge na-adịbeghị anya, e wuru ụlọ ọhụrụ iji gboo mkpa nke imepụta igwe nrụpụta n'ime otu izu na Smartweigh.
Smartweigh Sino-mkpọ 2021 ngosi
Otu Smartweigh ga-egosipụta na Sino-mkpọ 2021 na 4-6, Machị 2021. Booth nọmba: 1.2 / A55 Adreesị: Mpaghara A, China Import & Export Fair Complex, Guangzhou, PR China. 27th China International Exhibition on Packaging Machinery & Materials bụ a na-eduga na ọkachamara nkwakọ ahia ...
The uru na ọghọm nke agụụ rotary mbukota igwe
Rotary agụụ mbukota igwe a mụrụ maka idozi factory ọrụ ụkọ, ọ bụ otu n'ime agụụ mbukota igwe. The rotary agụụ mbukota igwe dị mma maka ụlọ ọrụ ogologo okwu mmepe n'ihi na nke akpaaka: akpaaka bulie efu akpa, na akpaaka oghe akpa, ebipụta ụbọchị, akpaaka jupụta, akara na o ...
Pickle kimchi na-eri nrịba akara na ite na karama
Food nwere nri kọmịlị dị ka kimchi? Kedu akara nke kachasị amasị gị? N'oge na-adịbeghị anya, Smart Weigh kwadoro kimchi na karama akpaaka na-ebu ngwongwo na ụlọ ọrụ Korea, onye ụlọ ọrụ ya wuru na mpaghara Jiangsu, China. "Ọ dịghị mgbe anyị chere na nke a nwere ike ịbụ n'ụzọ zuru ezu akpaaka ...
Smart Weigh ịga PROPAK CHINA ụlọ ntu 51A20
Nke a bụ ihe ngosi izizi na 2020, Smart Weigh team na-eche nleta gị. Bolọ ntu anyị bụ 51A20. Anyị na-egosipụta nke abụọ nkwakọ igwe na multihead weigher. Ihe ngosi ya bụ ijide n'aka na ngwaahịa ndị ahụ jupụtara na oke ma ọ bụ oke.
Smart Weigh enyi basketball egwuregwu na onye
na 21th October, 2020 Anyị nwere ike ịbịaru nso site na egwuregwu, basketball bụ otu n'ime egwuregwu nke nwere ike iweta peopel ọnụ. Anyị, SMART WEIGH nkwakọ ígwè co., Nwere a enyi basketball egwuregwu na anyị ogologo oge azụmahịa ibe. Egwuregwu asaa si Smart Weigh dị ka ihe ngosi sonyere egwuregwu a o ...